Prime Focus Tech သည်အရှေ့တောင်အာရှတွင် CLEAR Media ERP ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » အရှေ့တောင်အာရှရှိချုပ်အာရုံစိုက် Tech မှစတင်ရှင်းလင်းမှုမီဒီယာ ERP!
အရှေ့တောင်အာရှရှိချုပ်အာရုံစိုက် Tech မှစတင်ရှင်းလင်းမှုမီဒီယာ ERP!
* မှာ broadcast အာရှ 2014, ယခုခရီးစဉ် ချုပ်အာရုံစိုက် Technologies က '' တဲ # 5A8-02 ရှင်းလင်းမှု, Hybrid ကိုတိမ်တိုက်နှင့်စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်ကို Workflows ပေးခဲ့သည်, BPM ရဲ့အကောင်းဆုံးအတူတကွဆောင်ခဲ့ - South East Asia, ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးမီဒီယာ ERP (လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်း) နည်းပညာပလက်ဖောင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြည့်ရှုရန်။ ရှင်းလင်းသော အကြောင်းအရာကွင်းဆက် visualizes ့အကြောင်းအရာပေမယ့်အကြောင်းအရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်စီမံခန့်ခွဲ။
ရှင်းလင်းသော လွှတ်တင်ခြင်း, Transcode, ပက်ကေ့, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး & ကယ်ယူ - အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အလားအလာရှိသော Cable ကို VoDs, iTunes, Netflix, Youtube ကိုမှပေးပို့ဘို့ 400 ထုတ်ဝေစက်ရုပ်များ၏ကြိုတင်အထုပ်ထဲကနေ content တွေကို packages များဖန်တီးရန်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင့်စစ်ဆင်ရေးမှဝင်ငွေတိုးလာတတ်၏။ ရှင်းလင်းမှုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်နေရာတိုင်းမှာတီဗီမှဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် VoD ပွညျ့စုံသေချာ။ ရှင်းလင်းမှုနှင့်အတူပေါင်းစည်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ဦးစုစည်းအိုင်တီပလက်ဖောင်းများကိုထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု, ငြ့်အရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အရောင်းအမိန့်စနစ်များကဲ့သို့အတည်ဆဲလုပ်ငန်းအိုင်တီစနစ်များကိုခွင့်ပြုချောမွေ့စွာပါပဲ။
ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ / စုစည်းခြင်းနှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း / တိုင်း 350,000 တီဗီအသစ်ဖြစ်စဉ်များအပေါ်စီမံခန့်ခွဲ 30 သန်းဖိုင်များကို VoD ပွညျ့စုံချွေတာ / 40% အချိန်ကိုအပ်စီမံခန့်ခွဲမှု / 10% ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာအောက်မှာအကြောင်းအရာ 100,000 နာရီကျော်: ဤတွင်ချုပ် Focaus Technologies ကထဲကနေရှင်းလင်းမှုနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များဖြစ်ကြသည် တစ်နှစ် / က ISO 27001: 2005 သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း, ပရိတ်သတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး 99.987% င့်နေချိန် / YouTube ကလက်မှတ်ရ။
ကနေရှင်းလင်းမှုနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုတကယ်တော့တွေ့ရှိချက်နှင့်သုတေသနများအတွက် ချုပ်အာရုံစိုက် Technologies က သွားပါ: www.primefocustechnologies.com/
checkout ဖို့သေချာပါစေ ထုတ်လွှင့် Beat အားလုံးသင့်ရဲ့ BroadcastAsia 2014 လွှမ်းခြုံများအတွက်!
ချုပ်အာရုံစိုက် Technologies ကအကြောင်း:
ချုပ်အာရုံစိုက် Technologies က (PFT) ချုပ်အာရုံစိုက်, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်န်ဆောင်မှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များ၏နည်းပညာလက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ PFT ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းနက်ဥာဏ်တော်အားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံမီဒီယာနှင့် IT ကျွမ်းကျင်မှုတစ်မူထူးခြားတဲ့ရောစပ်အတူတကွတတ်၏။ CLEARâ "¢ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုရ Hybrid ကိုတိမ်တိုက်နည်းပညာ-enabled မီဒီယာ ERP ပလက်ဖောင်းနှင့် Cloud မီဒီယာန်ဆောင်မှုများအကူအညီနဲ့ထုတ်လွှင့်, စတူဒီယို, အမှတ်တံဆိပ်, အားကစားနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အဖွဲ့အစည်းများဖန်တီးမှုပေးရန်မောင်း, ဂေဟစနစ်ထိရောက်စွာနှင့်ရေရှည်တည်တံ့မြှင့်တင်ရန်, ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အသစ်သောငွေရှာခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်။ တစ်ဦးကို Global ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်လိုင်းကထောက်ခံစတူဒီယိုနှင့်WorldSourcing®မော်ဒယ်၏ချုပ်အာရုံစိုက် '' ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကွန်ရက်က PFT ဖောက်သည်သူတို့ကိုက content ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် virtualize နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အကြောင်းအရာဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲကူညီတို့မှာအသွင်ပြောင်းလဲဖြေရှင်းချက်ပူဇော်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဧပြီလ 2014 ခုနှစ်, PFT DAX ဝယ်ယူခြင်း, Primetime Emmy®ဆုကိုဒစ်ဂျစ်တယ်Dailies®ချုပ်အာရုံစိုက်အနိုင်ရတဲ့၏ဖန်တီးသူအိန္ဒိယအတွက် NSE နှင့် BSE အပေါ်စာရင်းဝင်တစ်ဦးအများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ - မှာပိုပြီးကြည့်ရှုပါ: www.primefocustechnologies.com/who-we-are#sthash.KmzPqGVB.dpuf
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ 2014-05-31
ယခင်: ဗီဒီယိုကိုကိရိယာအငှားဌာနများ Flypack ငှားရမ်းခြင်းယူနစ်အတွက် Calrec အသံစက်များ Installing အားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ရာထူးကိုပိုကောင်းစေ
နောက်တစ်ခု: parity Group မှရွှေရင်ပြင် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုရရှိသည်